अम्बाको बोट | मझेरी डट कम
Biju Subedi — Sat, 10/17/2020 - 18:24
सानोबेला बीउहरु थुपारी खेल्थेँ । यो यसको बीउ, यो यसको बीउ । अनि “यो बीउ रोपेमा यसकै हजारौँ बीउ हुने लटरम्म फल लाग्ने रुख उम्रन्छ” भन्ने उत्सुकता ! मैले सानोमा यसरी थुप्रै बीउहरु रोपेँ, “सानोसानो दिमाग हराम” भनेजस्तो कुनैपनि कुनैपनि बीउ सप्रेन । बीउले रुखको रुप लिन सकेन । पुर्वव्यावसायिक शिक्षाले सिकाएको व्याडमा पनि हुर्केन । एउटा बीउमा पलाउ पलायो । मेरो खुशीको सीमा रहेन । म प्रत्येक दिनजस्तो करेसा बारीमा त्यो पलाउ पलाएको हेर्न गइरहन्थेँ मानौँ धेरै ठुलो अनुसन्धान सफल भएजस्तो । त्यो बेला खुशीले झुमेको थिएँ म । विस्तारैविस्तारै बीउको पलाउले सानो बोटको रुप लियो । म दङ्ग पर्दै गएँ, ढुक्क पनि भएँ । बोट सँगसँगै म पनि ठुलो हुँदै गइरहेको थिएँ, आफ्नो अनुभवले पनि शारीरिक रुपले पनि । एकवर्षमा त्यो बोटले ठुलो अम्बाको रुखको रुप लियो । शायद मेरो सपना साकार भयो ।
कमिलाले त्यो रुखका पातहरु ओसारपसार गर्दा पनि आफुलाई दुख्न थाल्यो । प्रत्येक वर्ष बैशाखजेठतिर सानो गेडा अम्बा फल्थ्यो र ६ महिनाजतिमा पाकेको फल दिन्थ्यो । अम्बाको बोटमा जो पनि खेल्न आउँथ्यो, पात उखेल्ने, डाँठलाई घोस्रने गथ्र्यो, मैले सबैलाई सम्झाउँथेँ कि “यसरी घोस्रने अनि उखेल्ने गरेमा फल राम्रो लाग्दैन ।” म सुत्ने कोठाको झ्यालनिरै त्यो अम्बाको रुख झ्याँगेको थियो । यस्तोमा सानोमा आफुले धेरै रेखदेख गरी हुर्काएकोले अम्बाको बोटले आफुलाई हेर्न आएजस्तो लाग्थ्यो । अम्बासँग सामिप्य हुन पाउँदाको आनन्द नै बेग्लै थियो ।
कहिल्यै आफु नितान्त एक्लो भएको बेला विहानको शित तपतप चुहिँदा आँसु खसाली आफुसँगै रोइदिए जस्तो लाग्थ्यो । जब आफुसँग मिल्ने साथीहरु भेटघाट हुन्थ्यो, खुशीले जब म झुम्मिन्थेँ त्यत्तिबेला अम्बाको बोट पनि रमेर लहलह झुल्थ्यो । जब खुशीले सङ्गीतमा झुम्मिन्थेँ, अम्बाको बोट पनि त्यसरी नै नाचेझैँ लाग्थ्यो ।
एकदिन मेरो मनमा त्यस्तो आउन नहुने थियो, आयो । पछुतो भयो अम्बाको बोटबारे यसरी सोचेकोमा ! त्यो के भने “अम्बाको बोटले छेकेर मेरो कोठामा जाडोमा घाम नआउने भयो, बाहिर सडकमा पनि हेर्नलाई छेकिने भयो” भनी चिन्तित भएँ । त्यही बेला पनि केही कुरा बुझेझैँ गरी अम्बाको बोट लहलह झुल्दैथ्यो, “म केही न केही गर्छु” भनेजस्तो । आफुलाई भने कस्तो ग्लानी भइरह्यो, “यत्ति राम्रो सन्तानलाई पनि मैले किन नकारात्मक सोचेँ” भनेर । तर सोच्दै नसोचेको भयो । अम्बाको बोट त्योबेलादेखि धेरै झुक्यो । रुख ढल्ला भनी हामीले पर्खालमा डोरी बाँधी अलिकति उभ्याएर अम्बाको रुख बनायौँ । तरै पनि ढल्किएकै थियो । जाडोमा फेरि कोठामा घाम आउने भयो । बाहिर सडकमा पनि खुलस्त देखिने भयो ।
मैले अम्बाको बोटलाई मलमलको कपडा भिजाएर सफा गरेँ । मनमनै आफुलाई परेको मर्का व्यक्त गर्दा पनि अम्बाको रुखले थाहा पाएको देखी म दङ्ग परेँ । मलाई मान्न करै लाग्यो “बरु म पो अम्बाको रुखको सन्तान रहेछु ।” कमिलाहरुले फेरि त्यहीँका पातका ससाना पत्रहरु ओसारेको देखेर म दुःखीत भएँ । कमिलाहरु जाने बाटो अर्कैै बनाइदिएँ । बल्ल मन अलि हलुङ्गो भयो । जत्ति धेरै अम्बाको बोट बुढो हुँदै गयो, फलहरु झन्झन् राम्रो दिन थाल्यो मानौँ वरिष्ठ हुँदै गएपछि अर्तिउपदेश शारगर्भित र अति उपयोगी दिएजस्तै । फेरि बढी झुक्दै पनि जान थाल्यो ।
केटाकेटीहरु आउँथे, मट्याङ्ग्राले हानेर अम्बा झार्थे, टिपेर भाग्थे । “के हामीलाई गाली गर्ने, पिट्नेहरुलाई हामी फल दिन सक्छौँ ?” अहँ कदापि सक्दैनौँ । तर उपकारी, गुणी यस झुकिरहेका अम्बाको बोटप्रति म नतमस्तक छु । दया, करुणा, सद्भाव अविरल रहेको यो बोटबाट हामीले धेरै सिक्नु बाँकी रहेछ ।
एकदिन सपना देखेँ,
.......अम्बाको बोट अर्कै ठाउँमा जन्म लिनेबारे मसँग सोध्दै थियो, “धेरै वर्ष भो तिमीहरुको पुर्खाको सेवा गरेको । सबैलाई सहयोग गरिहरन पाउँदाको आनन्द शब्दमा वर्णन गर्न म सक्दिन । तिमीहरुको खुसीले गर्दा म हर्षले विभोर भइरहेको थिएँ । अब सधैँ यसरी फल पनि त दिन सक्दिन । म बुढो हुँदै गइसकेको छु । सधैँ तिमीहरुले दिएको माया, सद्भाव त्यही त हो ! हावाहुण्डरीबाट धेरै बचायौ । असिनापानीबाट पनि त्यत्तिक्कै बचायौ । त्यत्ति भएर पनि सधैँ मलाई साँझ विहान अमृत पानी पिलाउँछौ । सडेका अमृतहरु मलाई जरामा दिन्छौ । सासबाट कार्वनडाइअक्साइड दिन्छौ, त्यसैलाई मैले घामबाट पातबाट पनि खाना बनाउँछु । हामीलाई नचाहिने कुरा अक्सिजन तिमीहरुलाई अमृत भएको छ । छहारीमा तिमीहरु भलाकुसारी गर्छौ । तिमीलाई तिम्रो कोठामा हेरिरहन पाउँदा एकदम आनन्दित हुन्छु । एउटा एकदमै नौलो किसिमको खुशीको आभास हुँदो रहेछ । धेरै मनकारीहरु पनि देखेँ, धेरै छुद्रहरु पनि देखेँ । तर तिमीले जत्ति रेखदेख कसैले पनि गरेको देखिनँ । मेरो आत्मा यस धर्तीको भित्र बीउ रुप लिएर आएदेखि मैले तिम्रै रेखदेखमा हुर्कँदै आउन पाएँ । जिन्दगीमा शिशिरवसन्त दुबै समयमा तिमीले उत्तिक्कै मनसुवा गर्यौ । त्यो अपार माया म कदापि विर्सन सक्दिन । शायद म मानव हुनेबेला तिमीलाई अम्बाको बोट बनाई यसरी नै सेवा गरे मात्र मेरो तिमीप्रतिको ऋण चुक्ता हुन्छ जस्तो लाग्यो । तेजतेजको हावा हुण्डरीबाट कत्ति बचायौ । चर्को घाम हुँदा पानीको शित्तलता दियौ । त्यस्तै ठण्डीको मौसममा कहिल्यै अमृत मलको कमी हुन दिएनौ, त्यसबाट मैले राप निकाल्न पाएँ । तिम्रो मायालाई म कदापि भुल्न सक्दिन । तिम्रो मायालाई म कदापि भुल्न सक्दिन ।.........."
जब म झल्याँस्स विउँझिएँ, अम्बाको बोट मेरो कोठाको झ्यालमा लहलह झुल्दै थियो र “तिम्रो मायालाई म कदापि भुल्न सक्दिन ।” भने जस्तै लागिरहेको थियो । अरु कुरा सबै सपनामा भएपनि यही बोटले मेरो दिमागमा सञ्चारित गरेझैँ लागिरह्यो । मानौँ सपनाका कुराहरु सबै यसरी लहलह भै भनिरहेजस्तो ।
मैले सोचेँ, “हामी त कोठा भित्र बस्छौँ । तर अम्बाको बोट त दिनरात छ्याङ्ग हावा, पानी, असिना, राप, ताप आदि सहेर हाम्रो निम्ति निरन्तर सेवा गरिरहेको हुन्छ । उसलाई त खालि हाम्रो मात्र पीर रहेछ । दुनीयाँदारीको सेवामा तल्लीन यी अम्बाको बोट मलाई साक्षात भगवान नै लाग्यो । सायद भगवानको भाषा योभन्दा मिहीन हुनुपर्छ । दुःखमा पनि सद्भावना सिक्नु त यस्ता साक्षात् भगवान नै पो चाहिने रहेछ । उनीहरु हाम्रा सन्तान होइनन् बरु हामी उनीहरुका सन्तान रहेछौँ ।
हरेकको आआफ्नो भाषा हुन्छ तर विरुवाको भाषा वैषिष्त्य हुन्छ । यस्ता विरुवाको हत्या गर्नु प्राणी हत्याभन्दा महापाप हो । सबै बोटविरुवाको भाषा यस्तै त हो नि यीे अम्बाको बोटको जस्तै । अति उच्च तहको विवेक रहेको मान्छेभन्दा धेरै चेतनशील यी अम्बाको रुखमा हजारभन्दा बढी अम्बा फलेका छन्, प्रत्येक अम्बामा पनि सयौँ बीउहरु छन्, तर ती सबभन्दा पनि अम्बाको वृक्षलाई कसरी फल राम्रो दिने भन्ने नै चिन्ता रहेछ । अम्बाको एकएक बीउ अनमोल रहेछ । सबै बीउहरुको भावना पनि उही रहेछ । हामीले यस्ता कुरालाई पनि बुझ्ने विज्ञान वनाउनुपर्छ । यसैबाट सबैतिर सद्भाव ल्याउनुपर्छ । भौतीक रुपले नदेखिए पनि मनले हेरेर बुझ्नुपर्छ , यी देववाणीहरु । कस्तो उदार, परोपकार । कस्तो उदात्त ! विनाभेदभाव अँध्यारोमा प्रकाश दिएसरि निरन्तर फल दिन क्रियाशील !!
gorkhe — Tue, 11/03/2020 - 20:31
तिमीसंगको त्यो पहिलो रात भुल्या छैन
गजल सिद्धान्तको उपयोगी पुस्तक
संगसंगै लेक बेशी डुलेको बिर्सियौ कि